Work-life Integration – How She Did It
Posted September 15, 2019 kmsadminLeaveacommentPosted in Blog, Women Entrepreneurship, Work-life Integration
ကျွန်မတို့ How She Did It ကို message ပို့ပြီး တိုင်ပင်စာတွေပို့တဲ့အထဲက အမေးအများဆုံးမေးခွန်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ထူးခြားတဲ့မေးခွန်းတွေကို စာဖတ်သူတွေလည်း ဗဟုသုတဖြစ်အောင် #LetsGetOverIt အနေနဲ့ ကျွန်မမျှဝေသွားပါမယ်။ မေးတဲ့သူနဲ့ သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြသွားခြင်းမလုပ်ပါဘူး။ ကျွန်မကိုယုံကြည်ပြီး တိုင်ပင်လာသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ တိုင်ပင်စာတိုင်းကို သေချာအချိန်ပေးပြီးဖတ်ပါတယ်၊ ပြီးမှ စာသေချာပြန်ရေးပါတယ်။ အမျိုးသမီးအချင်းချင်းမို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု၊ လမ်းပျောက်နေရင် လမ်းပြနိုင်မှု လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Let’s Get Over It လို့နာမည်ပေးတဲ့ အဓိက,ကရည်ရွယ်ချက်က ဒီမေးခွန်းတွေဟာ အမျိုးသမီးတိုင်းလိုလို ရင်ထဲမျိုသိပ်ပြီး ခံစားရတဲ့မေးခွန်းတွေ၊ စိတ်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ အတွးတွေ၊ ဘဝတက်လမ်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပိတ်ဆို့စေတဲ့ အတွေးတွေ။ ဒါကို ဖွင့်ချပြီး၊ မျှဝေလိုက်က်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ […]
Posted September 15, 2019 September 15, 2019 kmsadminLeaveacommentPosted in Blog, Work-life Integration
Passion ဆိုတာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာ၊ အရမ်းအားစိုက်စရာမလိုပဲ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အရာ၊ အချိန်တွေ ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိအောင် စိတ်ကိုနှစ်ပြီး လုပ်နိုင်တဲ့အရာ။ Passion ကိုအခြေခံတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်ကို လုပ်ကိုင်တယ်ဆိုရင် အောင်မြင်နိုင်ခြေ ပိုများတယ်လို့ ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းက အလုပ်အပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှု (motivation) က အလုပ်လုပ်ရင်းရတဲ့စိတ်ကျေနှပ်မှုဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု တွေဖြစ်တဲ့ ဝင်ငွေရတာ၊ ရာထူးတိုးတာ၊ လူအထင်ကြီးတာ စတဲ့အရာတွေကနေလာတာမဟုတ်တာကြောင့်။ အဲ့ဒီတော့ လခရတဲ့အချိန်မှာ motivate ဖြစ်ပြီး၊ promotion တွေမရတဲ့အခါ motivation ကျတာမျိုးတွေ သိပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ ရာထူးခေါင်းစဉ်တွေထက် တကယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ပျော်မွေ့တဲ့အတွက် ရာထူးကြီးတာ၊ငယ်တာ/ ရာထူးခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲတာထက် ကိုယ်ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတာ (autonomy), တာဝန်ယူခွင့်ပေးတာ (responsibility) နဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သပ်တဲ့ တီထွင်ကြံစခွင့်ပေးတာ (creativity) ကကိုယ့်အတွက် အရေးပါတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တယ်။ Passion […]
Posted August 26, 2019 August 26, 2019 kmsadminLeaveacommentPosted in Blog, Career-loving Women, Women Entrepreneurship, Work-life Integration
နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ကို ဘယ်လိုဆင်နွှဲမလဲ? ——————————————– ဒီနှစ် နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ရဲ့ ခေါင်းစဉ်က #BalancedForBetter ဖြစ်တယ်။ Balanced ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မျှတမှုရှိတာ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်အကျိုးပြုပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တာ။ Gender Equality Network ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ကျွန်မအရမ်းသဘောကျမိတယ် – “လူမှုဘဝပိုကောင်းဖို့ ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်စို့” တဲ့။ ဒါဆိုဘယ်နေရာမှာ ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်ဖို့လိုလဲ? ကျွန်မရဲ့ခံယူချက်သုံးခုကို ပြောပြမယ်နော်။ ၁)Equality Starts at Home ကျွန်မတို့တွေ women empowerment လုပ်တဲ့အခါတိုင်း men empowerment ကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်ခွင်ဝင်ခွင့်ရလာတဲ့အခါ၊ အမျိုးသားတွေကို မိသားစုဘဝထဲမှာ ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်အောင် အခွင့်အလမ်းတွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေပေးဖို့လည်းလိုတယ်။ ကျွန်မမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ အရမ်းအံ့သြသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံတယ် .. ဖခင်တစ်ယောက်ပြောတယ်၊ သူ့ကလေးဘာကြိုက်တတ်လည်းသူမသိဘူးတဲ့။ ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ ကလေးတစ်ခုခုလိုရင် […]
ဝန်ထမ်းဘဝမှ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝသို့ —————————— Writer: Thet Mon Aye ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Global Entrepreneurship Week ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးကကျင်းပကြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ How She Did It ကတစ်ပတ်အတွင်း ပွဲငါးပွဲမှာ Women Entrepreneurship နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပါဝင်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီပွဲတွေက Building Product For Women, GEW 2018: HR Innovation: Crazy? Not Crazy?, GEW 2018: Mentor Her, Women in Business & Leadership Development, Women Business Idea Competition အဲ့ဒီပွဲတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်ချင်တယ် ideas တွေအများကြီးရှိတယ် ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ […]
Personal Leadership ——————— ကိုယ့်အသိထဲမှာ ဘဝကိုတဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူတွေဆိုတာ ရှိမှာပေါ့၊ အနည်းဆုံးတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ဖူးမယ်ထင်တယ်နော်။ ငယ်တုန်းက အရမ်းရှက်တတ်ကြောက်တတ်တယ် ဒါပေမယ့်အခုချိန်မှာ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေတယ်၊ လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့စကားထွက်ပြောနိုင်တယ်။ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဘဝကလာပေမယ့် အခုချိန်မှာ ပိုမြင့်မားတဲ့နေထိုင်မှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး မိဘတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ အရင်တုန်းက အရမ်းဆိုးသွမ်းပြီး လူတွေကိုဒုက္ခပေးသူတစ်ယောက်က အခုချိန်မှာ လူတွေကိုကြင်နာပြီးဖေးမတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလူတွေအားလုံးမှာ တူညီတဲ့အချက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ယုံကြည်ကြတယ်။ ကိုယ့်ဘဝမှာရော ဒီလိုလက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုကို ပြောင်းလဲချင်တာမျိုးရှိလား? ဥပမာ – အားနာတတ်တဲ့အကျင့်ကို ဖြတ်ပြီး “no” လို့ပြောချင်တယ်။ ကိုယ့်အကူအညီကို လိုအပ်လို့တောင်းရာကနေ မလိုလဲခေါ်ခိုင်းပြီး ကျေးဇူးမတင်တဲ့ အခြေအနေတွေ၊ အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတဲ့အခြေအနေတွေ၊ မလုပ်နိုင်ဘူးပြောမိလို့ ကိုယ်စိတ်မကောင်းအောင် ပြောခံရတဲ့အခြေအနေတွေ ကြုံရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအကျင့်ကိုပြင်ချင်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်သူတွေကလည်းပြောနေပြီး “အားမနာသင့်တော့ဘူး၊ ဒီအကျင့်ကိုပြင်တော့။” […]